Na-eduga More Na-eduga Na Landingi's Landing Page Builder maka WordPress | Martech Zone
Na-eduga ndị ọzọ na Landingi's Landing Page Builder maka WordPress
Wenezdee, Machị 3, 2021 Wenezdee, Machị 3, 2021 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ahịa na-etinye ụdị na ibe WordPress, nke ahụ abụghị nke kachasị mma, na-agbanwe ọdịda peeji nke. Ibe ọdịda na-enwekarị atụmatụ na uru metụtara:
Obere ihe nkesa - Chee ihu maka peeji ọdịda gị dịka njedebe nke okporo ụzọ yana obere ihe ndọpụ uche. Igodo, n'akụkụ ụzọ, ụkwụ na ihe ndị ọzọ nwere ike ịdọpụ onye ọbịa gị. Onye na-ewu akwukwo na-enyere gị aka ịnye ụzọ doro anya iji gbanwee ntụgharị na-enweghị ndọpụ uche.
Mmekọrịta - Dịka onye ndu na-atụgharị na peeji nke ọdịda gị, ọ dị oke mkpa na enyere onye ndu aka onye kwesịrị ekwesị ma ọ bụ tinye ya na mkpọsa na-azụlite iji chụpụ ha ka ha bụrụ ndị ahịa.
Nyocha A / B / x - Ibe ọdịda ga-enwe mmewere ọ bụla dịka ụdị dị iche iche nwere ike ịnwale ma tụọ iji nyere ndị ahịa aka ebuli ha tọghatara udu.
Ndi oru - Ikike ịtụgharị gị njem nke onye na-azụ ahịa to atụ̀ ahịa foneelu nzọụkwụ enyere gị aka ịghọta omume onye ọrụ gị ka i wee nwekwuo njikọ aka na ọkwa ọ bụla.
Mbiputegharị - Otu ọdịda peeji adịghị arụ ọrụ dị ka nke ọma dị ka ọtụtụ, ezubere iche ọdịda peeji nke. Inrụ ọrụ na mbipụta na ịhazi ibe ọ bụla maka ibe ahịa ị na-achọ ịgbanwe ga-eme ka ndị ọzọ tinye aka… na ntinye ego ha ga enweta.
Landingi ọdịda Page Wuru
Ọdịda na-enye niile ndị a ngwọta na ndị ọzọ. A ihe ị hụrụ bụ ihe ị nwetara (WYSIWYG) Dọrọ & dobe, onye na-ewu akwụkwọ na-enweghị ọdịda na-enyere gị aka ịpịpụta ngwa ngwa, mepụta abụọ, na peeji nke ọdịda ọdịda sitere na nchịkọta ndebiri 300 +… na-echekwa gị oge buru ibu.
Ikpo okwu na-enyere gị aka ịme nyocha A / B na-enweghị njedebe na ọbụlagodi na ị na-etinye engine nkwanye iji mee ka peeji ọdịda gị dị mkpa na ọdịnaya dị ike.
Ọdịda gụnyekwara onye na-eme ndokwa mkpọsa siri ike ịmalite ma kwụsị mkpọsa gị n’oge na-akpaghị aka.
Jiri ohere 40 + mee ihe, nyocha, nsuso, yana ịdebe ngwaọrụ iji melite arụmọrụ nke ahịa ahịa gị. Gafe na-eduga n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ahịa email ọ bụla ma ọ bụ ngwá ọrụ CRM ị na-eji, jikọta na ngwọta dịka MailChimp, HubSpot, SalesForce, na Zapier.
Landingi kpaliri Popups
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịpịpụtakwu ọtụtụ ntụgharị, na-akpalite popup dabere na ebumnuche ọpụpụ, oge na saịtị, ma ọ bụ mpịakọta omimi nwere ike melite ike gị ijide ụzọ ahụ ma ọ bụ opekata mpe ozi email nke ndị ọbịa iji mee ka ha banye mkpọsa na-azụlite. Landingi na-enye nke ahụ!
Ndenye peeji nke WordPress ngwa mgbakwunye
Ntọala peeji nke ndozi na-achọkarị ka ị na-eduga site na subdomain, mana Ọdịda awade a WordPress Nkwụnye ebe ị nwere ike bipụta peeji nke ọdịda ozugbo n'ime gị WordPress na saịtị!
Start your Landingi WordPress ọdịda Page Free Ikpe
Ngosipụta: Abụ m mmekọ maka Ọdịda na m na-eji njikọ ndị ahụ n’isiokwu a.
Tags: ọpụpụ ebumnucheọpụpụ nzube popupọdịda peeji na-ewu ụlọọdịda peeji nke ngwa mgbakwunyeọdịda peeji nke WordPress ngwa mgbakwunyembido peeji nkeọdịdapopups kpatarawordPress ọdịda peejiwordpress plugin
Ọnụego ntụgharị ntụgharị: Ntuziaka 9-Nzọụkwụ Iji Nwee Conba Ọnụego Ntugharị
Retail na andzụ ahịa Trends maka 2021